Ny voalohany NITARIKA ny tetikasa FETON-Orinasa Fahalalana-FETON CORPORATION Co.,Ltd
Ny tetik'asa LED voalohany an'ny FETON
Fotoana: 2012-03-01 Hits: 118
Tamin'ny Mey 2012, FETON dia nanomboka ny tetik'asa consultant voalohany, nanome famakafakana ho an'ny mpanamboatra LED 1 Top Ceramic COB any Chine ary namokatra vokatra lafo indrindra.
Maro ny olona mety nieritreritra fa ny tena zava-dehibe amin'ny fivarotana ny vokatra LED dia manao vokatra tonga lafatra, mahita mpanjifa marina ary manenjika azy na ny orinasan'izy ireo hividy vokatra LED.
Fa maninona ny mpanjifa no mila mividy ny vokatrao? Inona ny sandany azonao entina aminy? Vitsy ny peolpe nieritreritra toa izany.
Raha ny tena izy dia tokony avadika ny tokony ho izy.
Avy eo dia hampiditra vetivety izahay hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny foto-kevitra momba ny fandikana loko.
Esory ny tombony amin'ny sehatry ny LED
Ho an'ny orinasam-pifandraisana dia tokony ho voalohany. Rehefa ny orinasam-barotra iray ihany no mahalala ny tombony sy ny fatiantoka dia mahita ny làlan'ny tsena.
Ny foto-kevitra momba ny toerany dia ny manazava ny filàn'ny mpanjifa sasany ao anaty markey, ary ny hanomezana izany ampahany amin'ny fangatahana izany amin'ny fomba hafa amin'ny mpifaninana.
Midika izany, mila mamaly ireto fanontaniana efatra ireto ireto orinasa ireto:
* Iza aho?
* Iza ireo client?
* Inona no takin'izy ireo?
* Iza ireo mpifaninana?
Mitadiava mpanjifa marina
Noho ny fetran'ny loharanom-piasan'ny orinasam-pifandraisana dia tsy afaka manome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra isika, noho izany dia mila mahita ireo mpanjifa mety indrindra isika ary mahafeno ny filan'izy ireo.
* Inona avy ny toetoetran'ny mpanjifa?
* Inona avy ireo antony manosika sy tianao amin'ny fitondran-tena?
Fantaro ny fangatahan'izy ireo
Aorian'ny fahazoana ny famotorana dia manome hatrany ny teny faran'izay haingana ny varotra raha ny fantatra. Saingy ny tena marina, izay ilain'ny mpanjifa bebe kokoa dia torohevitra sy vahaolana matihanina.
Matetika no takona ao ambadiky ny antenaina ny demand. Azontsika atao ny manatratra toe-javatra fandresena amin'ny fandresena matihanina hanampiana ny mpanjifa hahita ny tena fitakiana.
Ampifandraiso ireo vokatra
Ny dingana farany amin'ny varotra dia ny manome ny mpanjifa vokatra amina vahaolana mifototra indrindra amin'ny vidiny mora indrindra.
Ny famadihana hevitra ho lasa vokatra manokana sy ny tena tombony dia ny lanjantsika ho an'ny mpanamboatra sy ny mpanjifa.
Taloha: Ny zava-bita voalohany voalohany an'ny FETON
Next: Ny tantara nanorina FETON